Xeerka dejinta dhallaanka qaxootiga ah oo dhaleeceyn loo soo jeediyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xeerka dejinta dhallaanka qaxootiga ah oo dhaleeceyn loo soo jeediyey
La daabacay tisdag 25 februari 2014 kl 12.26
Ilaa sannadkaan bilowgiisii waxay degmooyinka dalku ku khasban yihiin in ay qaataan dhallaanka qaxootiga ah oo keligood dalka yimaada marka sharciga la siiyo. Balse sharcigaan ayaa hadda dhaleecyn loo soo jeediyey. Degmada Östra Göinge oo ka mid ah degmooyinka ka gadoodey ayaa ku doodeysa in aysan Hay’adda Socdaalku sharciyan xaq u lahayn in ay sidaas degmooyinka ku xirto:
- Hay’ad dolwi ahi xaq uma leh in ay tiraahdo ”hadda ilmo yar ayaa Göteborg ku sugan – idinka ayaana mas’uul ka ah”. In sharciga adeegga bulshadu dhaqangalo waxaa shuruud u ah in ilmahaasi uu shakhsi ahaan ku sugan yahay degmada laga hadlayo. Sidaasna waxaa yiri Jonas Rydberg oo ah madaxa degmada Östra Göinge.
Hase yeeshee Hay’adda Socdaalku iyadoo kuskaneysa sharcigaan cusub oo soo baxay 1dii Jannaayo ayey degmooyinka ku khasbi kartaa in ay qaataan carruurta qaxootiga ah oo keligood socda. Ilaa haddana ilaa 110 carruur oo qaxooti ah ayaa sidaas loogu gudbiyey 21 degmo ka mid ah degmooyinka dalka.
Hay’adda daryeelka iyo xannaanada oo loo gaabiyo IVO ayaa ku talajirta in ay dhowaan mowqif ka qaadato hadba degmada qaabbileysa carruurtaas qaxootiga ah. Isla markaasna sharcigaan ayaa dib u eegid lagu sameyn doonaa.
Hay’adda Socdaalka ayaan weli ka hadlin dhaleeceymahaas loo soo jeediyey.
Dhanka kale Lars Stjernkvist, oo guddoomiye ka ah golaha maamulka degmada Norrköping, isla markaas ah ruuxa ay dowladdu u xilsaartay in uu degmooyinka ka dhaadhiciyo in ay qaabbilaan carruur badan oo qaxooti ah ayaa hadda dhinac ka mid noqday khilaafka taagan:
- Waxaan u maleynayey in sharcigaan cusub oo khuseeya carruurta qaxootiga ah uu meesha ka saari lahaa in khilaaf noocaan ahi yimaado. Waxay ahayd markii ay dowladdu fursad u heshay in ay tiraahdo "xilkayaga ayaan gudaneynna oo si xaq ah ayaan mas’uuliyadda ugu qaybineynnaa degmooyinka. Laakiin degmooyinka oo dhammi sidaas ma qabaan. Waxaana u arkaa in ay xaqiiqadii tahay wax laga xumaado.